Davina Michelle nke na-esote transgender na Eurovision Song Contest? Duncan Laurence na-ahụ na ọ bụ onye omekome! : Martin Vrijland
Davina Michelle nke na-esote transgender na Eurovision Song Contest? Duncan Laurence na-ahụ na ọ bụ onye omekome!
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 27 Ka 2019	• 9 Comments
Dị ka Duncan Laurens si kwuo, kpakpando ọhụrụ bụ Davina Michelle ga-esonye na Eurovision Song Contest n'afọ ọzọ na nnọchite Netherlands. Davina kwụsịrị otu. "Ee nakwa otú ahụ?"Ya mere o nwere ike ịbụ transgender. Akọwara m ọtụtụ isiokwu (ihe atụ ebe a) aha ndị na-agwụ na a a na-ejikarị ndị mmadụ transgender eme ihe.
Anyị ahụlarịrị okwu ụgha LGBTI na Eurovision Song Contest na afọ ndị na-adịbeghị anya. N'afọ Eurovision Song Contest nke a, ọ dị ka ọ bụ ndị na-etinyeghị aka karị.
Kedu ihe na-ezighi ezi na nke ahụ? Ọ dịghị ihe ọ bụla, ma e wezụga na ọ dị ka ndị heterosexual na-amalite na-abata na a damn n'akụkụ na na emancipation yiri ka imebi okwu nduzi na efu nke nwoke heterosexual. O yiri ka a ghaghị ịkụzi nkesa ochie nke nwoke na nwanyi.
Ya mere, onye na-aga transgender n'afọ ọzọ? Otu na-enweghị ajị agba oge a na nwanyị nwanyi kwa. O kwere omume ha niile. Ọ dịghị ihe ọjọọ na nke ahụ, ma ọ bụrụ na ị jụọ onye Dutch. Naanị m chọrọ igosi gị ihe gbasara Lucifer nke dị n'azụ ya. Lucifer na-anọchite anya egwurugwu (ụwa ọhụrụ / ụwa ọhụrụ), mgbanwe ụmụ nwoke na-agbanwe (nwoke na nwanyị / nwoke na nwanyi). Transgenderism na mgbanwe site na ochie mmekọahụ mmekọahụ ka LGBTI ọkọlọtọ yiri ka ọ bụ ihe owuwu ụzọ mbata maka mgbanwe ọzọ: mgbanwe ka transhuman. Mmadụ dị ka igwefoto dijitalụ ụbụrụ en DNA na netwọk 5G (ịntanetị nke ihe, nke ị ga-abụ otu n'ime ihe ndị ahụ).
Ị nwere ike ịchị ọchị ugbu a, ọtụtụ ndị ga-eleghara ya anya dị ka ihe na-agbanwe agbanwe n'oge ochie ma ọ bụ ọbụna ịkpa ókè. Ka m doo anya: Enweghị m ihe ọ bụla megide Davina ma ọ bụ megide onye ọ bụla nwere mmekọahụ ọ bụla. Onye ọ bụla bụ mkpụrụ obi na anyị niile hà. N'ihi ya, anaghị m akpa ókè ma ọ bụghị nke ahụ. Achọrọ m ikwu okwu banyere agbata nke m chere na m nwere ike ịme. Ihe gbasara ebe siri ike nke Lucifer (onye aristocracy na Vatican, bụ ndị wepụrụ ụdọ n'azụ ndị ọchịchị ndị kwuo uche).
Site na mgbasaozi mgbasa ozi ya, ebe a siri ike na-ekwusara ozi ahụ na anyị nile nhata. Ọ bụ ebe ahụ ka a ga-ezite ya. Ndị inyom nile na-anọghị na-anọpụ iche na-ejegharị n'okirikiri dijitalụ (5G). Otú ọ dị, okwu ahụ bụ "hà" pụtara ihe ọzọ karịa otu. Nwa nwoke dị iche na nwanyi. Nke ahụ bụ usoro ndu. Ụdị kwesiri nhata. Otú ọ dị, okwu abụọ a na-emetụta ibe ha na akụkọ Orwellian.
N'ezie, enweghị m ike igosi na Davina bụ transgender na ọ bụrụ na ọ gaghị adị mma ma ọ bụ dị njọ, karịa ma ọ bụ obere. Ọ bụrụ na ọ bụghị, enwere m olileanya na ọ gaghị eche na a ga-akparị ya. Achọghị m ịkpasu onye ọ bụla iwe, mana naanị m na-ezo aka na-emekarị ka m kwenye.
Enwere m nchegbu banyere eziokwu ahụ bụ na e nwere ọtụtụ okwu nduhie maka LGBTI na (na afọ ndị na-adịbeghị anya karịsịa) transgender agenda. Ya mere, m na-enyo enyo bụ na a na-eji Davina maka nke a nakwa na nke a bụ ihe mere "onye ọhụụ" ji chọta ya, ya bụ, Marco Borsato na Armin van Buren ma Dunson Laurence na-enyekwa ya ugbu a dị ka onye na-ede maka Eurovision ọzọ. abụ ememe. Oge dị iche iche na-abụghị ihe omume telivishọn nile nke Davina gosipụtara.
Ya mere, anyị nwere ike ọzọ hụ usoro mmemme, bụ nke a na-akwado ndị ntorobịa maka ụkpụrụ ọhụrụ ahụ.
Naanị otu nke lyrics si Skywards song (lyrics), nke o doro anya na eziokwu zoro ezo ezo:
Rie, ehi ụra ma mee ihe
Onwe ya na ikpere
Free dị ka anu
'Ruo mgbe eze eze ga-ekwekọrịta
Na-eche na ọ dị adị
Ọ bụ ezie na adịgboroja ahụ ga-emechi akara ahụ
Nye ya ohere
Ma ọ bụ ọ ga-ahapụ nri ọ bụla
'Ruo mgbe o siri ike dika agịga
Kedu ihe dị njọ na transgender agbata ma ọ bụ nduzi? Ikwesighi ịchọta ihe ọ bụla na-ezighi ezi na nke ahụ. Otú ọ dị, echiche m bụ na a na-akwadebe ndị mmadụ maka usoro mgbanwe ahụ site na transgender n'ebe ndị mmadụ. Maka nke a, ọ dị mkpa na ahụ mmadụ na ụbụrụ na-adaba n'ígwé ojii, nke mere na ọ bụghị naanị ụbụrụ ejikọrọ na usoro nchịkwa, mana DNA nwekwara ike gbanwee na ntanetị.
Ya mere echere m na anyị na-akwado maka usoro ịgba ohu dijitalụ, ebe anyị na-eche na anyị na-agbapụ aka maka ọdịmma mmekọahụ n'oge ntorobịa. Ị chere na akwa mmiri dị oke? Mgbe oge ruru, ọ gaghị ekwe omume ma ị nweghịzi ike ime ihe ọbụla gbasara ya. Naanị m na-enye gị echiche m, na-achọghị imerụ ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ ìgwè.
isi iyi: sciencetimes.com, azlyrics.com
Duncan enweghị ike ịbụ abụ na Eurovision Song Contest agafeela (Mgbasa LGBTI)
Ihe egwu egwu nke Marco Borsato na Kuip na Rotterdam!
Na egwurugwu, 'M' na 'I Amsterdam', LGBTI na nkwa dị n'etiti 3
Olee mmetụta Pope Francis na nkuzi Kabbalah nwere na ndụ gị kwa ụbọchị?
Tags: Davina Michelle, Duncan, Eurovision, agba, nwa akwukwo, ụlọ ọgwụ, abụ ememe, transgender
27 May 2019 na 22: 00
Ọzọ ezigbo isiokwu. Ya mere, ozugbo ịkekọrịta na FB na Twitter ma mana ka anyị na-eteta atụrụ? Ya mere dị nnọọ ka Martin.
28 May 2019 na 02: 48
Ọ bụrụ na ịnwe ụbọchị n'oge a, ọ kachasị mma ịjụ ma ọ bụrụ na ha weta akwụkwọ ọmụmụ
28 May 2019 na 08: 08
Òtù Na-ahụ Maka Ahụ Ike Ụwa ebutelarị ụkpụrụ-edozi banyere ịmalite ọrịa ọrịa ugbu a, ịgbakwunye ọkụ na ịṅụ ọgwụ ọjọọ na Nkwekọrịta International nke Ọrịa na iwepu transgenderism n'ụzọ ziri ezi.
.. na oge
"N'aka nke ọzọ, e buliri ya elu na ahụ ike nke uche, kpamkpam, ịghọ" ọnọdụ metụtara ahụike mmekọahụ. "Nkọwa nke WHO na-anọgide na-agbanwe agbanwe karịa ụfọdụ mba" - "omume dịgasị iche iche nke okike na mmasị naanị ya abụghị ihe ndabere maka ikenye ihe nchoputa, "nke ICD-11 na-agụ, nke pụtara na ọ pụghị itinye ya n'ọrụ na ndị na-eto eto tupu oge uto na ndị na-emekọ ememme na-ejide ogwe aka banyere asụsụ a sụgharịrị n'ebe ọzọ na akwụkwọ ahụ, nke na-ezo aka n'ụdị mmega ahụ dị ka" nsogbu nke mmekọahụ mmepe. "
28 May 2019 na 17: 14
Ọ na-ejekwa ozi na-echekwa ihe. Dị ka ihe atụ, aka zoro ezo, emeela ka ọha mmadụ gbasaa maka ihe niile ga-adịrị ha! N'ezie, ihe niile dị n'usoro usoro nke ndị ezinụlọ ahụ na-ebibi na-ebibi mmadụ! Ndi mmadu ndi mara banyere obula ga-eji nwayọọ nwayọọ jụọ onwe ha otú ha chọrọ ịnwụ! Na nsọpụrụ na akọ na uche dị mma, ma ọ bụ dị ka ohu akụ na ụba na dịka cyborg na egwuregwu! Ezinụlọ ndị na-agbasi mbọ ike ka ha ghara ịkwado ha anaghị ahapụ ndị mmadụ fọdụrụnụ (maọbụ ihe ka ga-eme maka ya) nhọrọ! Na oge mgbanwe ha ha ga-akwatu ihe niile ma bibie ihe ga ka ha ga-eme!
29 May 2019 na 12: 36
Maka onye ọ bụla na-asị, "Ee, ma anaghị m ahụ apụl Adam"
29 May 2019 na 12: 42
29 May 2019 na 12: 44
Nyocha CT gị na-esonye n'ime ịwa ahụ Adam na-ewepụ. Nchoputa a dị mkpa n'ihi na ọ bụ naanị otu ụzọ anyị si mara otú e si akpọ ụdọ olu gị na njikọta nke cartilage.
29 May 2019 na 12: 45
12 September 2019 na 17: 33
Kedu ihe dịkwa njọ na nke a bụ na nrụzigharị na-akwụghachi ma na-enye ndụmọdụ na homonụ niile ụgwọ ọrụ ahụike, mana ọ bụghị, dịka ọmụmaatụ, dọkịta ezé ma ọ bụ physiotherapy. Ma oburu na dika nwanyi ka esi emebe ara ma choro imeju ara - n’agbanyeghi na odi ezi aru - onweghi ihe ikwughachi gi ma umu nwoke ndi choro ka emegharia. N’otu ebe m hụtara na ara na-apụ iche n’oge ịwa ahụ maka ụmụ nwoke tụgharịrị. Enweghị ike ịchọpụta ya nke ọma. Ma eleghị anya, mgbe ọ nọ na pleeboy.
Agbanyeghị, aghọtaghị m na ịchọrọ ilo mmiri homonụ ịhapụ ka ị belata mgbe ị ka ahụike yana na achọpụtara na ahụ nkịtị. O di nma na ahuru na ntughari. Ka ọ dị ugbu a, homonụ ndị ahụ siri ike na-emebi ahụike gị niile. Chee na ha agaghị ebi ogologo oge, na ha nwere nnukwu ọrịa cancer.
" Nsonaazụ nchịkọta Dutch na ọnwa 4 site n'aka nri gaa n'aka ekpe gaa Timmermans? Ndị omempụ Ndị aghụghọ!
Michael P. Thijs H. Jos B. ihe mgbasa ozi mgbasa ozi niile na-eduga ngwa ngwa iwebata iwu egwu nke na-emetụta onye ọ bụla »
Nleta nile: 15.827.687